जमरकट्टेल र स्थापित मन्त्री - प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
जमरकट्टेल र स्थापित मन्त्री
फाल्गुन १, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेतासमेत रहेका धादिङका प्रदेश सांसद शालिकराम जमरकट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सोमबार नियुक्त भए । त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिसकेका केशव स्थापित सहरी विकासविज्ञ मानिन्छन् ।
काठमाडौं ६ ‘क’ बाट निर्वाचित उनी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका छन् । मजदुर नेताको पृष्ठभूमिका जमरट्टेलसँग प्रदेशका सुरक्षा चुनौती र कानुन निर्माण तथा स्थापितसँग प्रदेशको समग्र विकास र योजनाबारे हेटाँैडास्थित कान्तिपुर सहकर्मी प्रताप विष्ट र नगेन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानी :
मन्त्री भएपछि अब तपाईंका एजेन्डा के–के हुन् ?
शान्ति, समृद्धि नै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो । समाजवाद उन्मुख हाम्रो राज्यव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने कुरा नै हो । यसका अलावा हाम्रो प्रदेशमा धेरै चुनौती पनि छन् । संंघीय राजधानीसहितको प्रदेश भएकोले यसका विभिन्न समस्या छन् । काठमाडौंको कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ सुरक्षा चुनौती छ । विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने, कलंकीदेखि नागढुंगासम्म जाने हो भने, नेताहरू बचेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ
जनताले नियन्त्रणमा लिने अवस्था छ । त्यहाँ १० घण्टासम्म जाम हुन्छ । खानेपानीका समस्या छ । प्रदेश सरकार कसरी व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने, संविधानले दिएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । हामीले ३५/४० वटा कानुन बनाउनुपर्छ । जुन हामीलाई १ वर्ष लाग्छ । कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी भएकोले मैले त्यसलाई ठूलो जिम्मेवारीको रूपमा लिएको छु ।
शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तपाईंका योजना के–के छन् ?
मेरो योजनाभन्दा पनि सरकारकै योजना हो, त्यसलाई मैले कार्यान्वयन मात्रै गराउने हो । नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएका कुरा, सरकारी निकायको सुरक्षाको कुरा नै प्रमुख कुरा हो । सरकारको जे नीति
बन्छ, त्यो कुरा नै मैले कार्यान्वयन गराउने हो ।
प्रदेशमा गुन्डागर्दी, मानव बेचबिखन, गाँजा खेती समस्याको रूपमा देखिएका छन् । तिनलाई नियन्त्रण गर्न तपार्इंका के योजना छन् ?
यो राज्यकै चुनौतीको रूपमा लिएको छु । जस्तो मानव बेचबिखनको सवाल केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवै मिलेर गर्नुपर्छ । जहाँसम्म गाँजाको कुरा गर्नुभयो, त्यसका लागि छलफल आवश्यक छ । जनताले त्यसलाई लगाएर आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम बनाइरहेका छन् । त्यसो हुँदाहामीले विकल्प दिनुपर्नेछ ।
राज्यले गैरकानुनी घोषणागरेको छ तर जनताले यसलाई खेतीको रूपमा आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन् । आफ्नोबारीमा फलाउने भएकाले सुन तस्करीजस्तो पनि यो भएन । उचित विकल्प दिएर गाँजाखेतीलाई विस्थापित गर्नुपर्छ ।
कानुन अभावमा प्रदेश सरकारलाई दैनिक कार्यसम्पादनमा असर गर्दैन ? केन्द्र र प्रदेश मन्त्रालयबीच टकरावको स्थिति आई प्रदेश भूमिकाविहीन हुने त होइन ?
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानलाई मूल कानुन मानेर हामीले काम गर्ने हो । हामी आवश्यक कानुन फटाफट निर्माण गर्छौं, सुव्यवस्थित ढंगले राज्य सञ्चालन गर्छौँ ।
प्रदेश राजधानीको बारेमा तपार्इंको धारणा के छ ?
यसरी बहस गर्नेभन्दा पनि यो एजेन्डा प्रदेशसभामा प्रवेश गर्छ । प्रदेशसभाबाट यो पास हुनुपर्छ । अहिलेको संविधानअनुसार, प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी नभनीकन कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । अस्थायी भनिरहनुको कारण पनि त्यही हो । प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्छ ।
तपाईंका योजना के– के छन् ?
मलाई सहरी विकासका लागि विज्ञका रूपमा लिइन्छ । सोही कारण मलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो जस्तो लाग्छ । काठमाडांै महानगरपालिकामा काम गर्दाको अनुभवले हामी काम गछौँ । विश्वका उत्कृष्ट ५ मेयरको सूचीमा म पनि परेको थिएँ । महानगरको विकासका अनुकरण अरूले गर्ने गरेका थिए । हामी पनि विश्वका उत्कृष्ट नगरलाई उछिन्ने गरी काम गर्छौँ । प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्छाँै जसले गर्दा काम गर्न सहजीकरण हुन्छ । कर्मचारीलाई ‘हायर एन्ड फायर’ को नीति अपनाइन्छ । हाम्रो आफ्नै निर्माण कम्पनी, लगानी बोर्ड र पूर्वाधार बैंक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । मसँग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहलिएका ५० जना विज्ञको टोली छ, त्यसलाई प्रयोग गर्छु । उनीहरू यहाँ आएरसहयोग गर्छन् ।
तपार्इंले गर्ने प्राथमिकताका कामचाहिँ के–के हुन् ?
मसँग तत्काल काम गर्न सकिने ५५ कामका डकुमेन्ट नै छन् । अब हरेक साता अकल्पनीय काम हुन्छ । मसँग सबै त्यस्ता खाले कौशल छ, जुन अरूसँग छैन । गर्न चाह्यो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । हामीले खुसिबुमा १ हजार रोपनी जग्गा विकास गर्यौँ । ६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्यौँ र २ वर्षमा नै फिर्ता लियौँ । त्यहाँ खानेपानी, ढल सबै कुराको व्यवस्थापन भएको छ । त्यसरी नै योजना बनाएर काम गर्ने हो ।
के हो त्यो कौशल ?
त्यस्तो कौशल सबैसँग कहाँ हुन्छ ? सबैसँग त्यो कौशल भएको भए सबैजना मन्त्री भइहाल्थ्यो नि । म जतिबेला पनि विकास निर्माणको सपना देख्छु । सपना देख्नेले मात्र परिवर्तन गर्ने हो । सपना नदेख्नेहरूले योजनाको कल्पनासमेत गर्न सक्तैनन् ।
समस्या र चुनौतीचाहिँ के छन् ?
समस्या र चुनौती नै मैले केही देखेको छैन । समस्या र चुनौतीको कुरा गर्‍यो भने त काम नै हँुदैन नि । प्रदेश ३ लिड गर्ने प्रदेश हो । यसले गरेका काम अरू प्रदेशले अनुसरण गर्नेछन् । यस प्रदेशमा भएका समस्याहरू चुनौती र अवसर दुवै हुन ।
राजधानीका बारेमा कुरा उठेका छन् नि ?
हेटौँडालाई म बस्नयोग्य सहर बनाइदिन्छु । मान्छे सबैले जग्गाको भाउ बढ्यो भन्छ तर म मान्छेको नै भाउ बढाइदिन्छु । राजधानीको विषयमा अहिले के नबोलौँ । केही बोल्यो भने अहिले यहाँबाट लखेटिहाल्छन् नि ।
मन्त्रिपरिषद्द्वारा ३ नियमावली पारित
हेटौँडा (कास)– प्रदेश ३ कोसोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ३ नियमावली पारित गरेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि, प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली र प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली पारित गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ०८:२८
काठमाडौँ — हिन्दु धर्मावलम्बीको महान् पर्व शिवरात्रि मंगलबार मनाइँदैछ । यो पर्व नेपाललगायत भारतका विभिन्न स्थानमा धुमधामसाथ मनाइन्छ । यस दिनलाई भगवान् शिवजीको जन्मदिनका रूपमा लिइन्छ । फाल्गुण कृष्ण चतुर्दशीको दिन शिव मन्दिरमा हिन्दु दर्शनार्थीको भीड लाग्छ ।
फाल्गुण कृष्ण चतुर्दशीको दिन शिवको ज्योर्तिलिंग उत्पत्ति भएको मानिन्छ । यही दिनमा शिवको पार्वतीसँग विवाह पनि भएको मानिन्छ । यस दिन निहार व्रत बसेर रातमा जाग्राम रहने चलन छ । यो दिन शिवको पूजा गरिन्छ । यो शिवलिंगको पूजा गर्नु हो । यो दिन नेपाल–भारतलगायत विभिन्न देशका हिन्दु साधुसन्त पशुपतिनाथमा आउने गर्छन् । उनीहरूलाई खाने, बस्ने, धुनी जगाउनेलगायत सबै बन्दोबस्त गुठी संस्थानले गर्दै आएको छ । संन्यासी सम्प्रदायका नागालगायत नानक, उदासी, कानफट्टा समुदायका साधुसन्तको पशुपतिमा भीड लागिसकेको छ । हरेक वर्ष लगभग ३५ सयको हाराहारीमा साधु आउने गरेको गुठीले जनाएको छ ।
शिवलिंग पूजा गर्दा प्रथम प्रहरमा दूधले, दोस्रो प्रहरमा घिउले र चौथो प्रहरमा महले स्नान गराउने प्रचलन छ । प्रत्येका प्रहरमा बेग्लाबेग्लै मन्त्रोचारण गरिन्छ ।
यही दिन सैनिक दिवस पनि पर्छ । सेनाले टुँडिखेलमा बढाइँ गर्छ । यो पर्व नेपालका अतिरिक्त भारतको बाराणासी, वैद्यानाथ धाम, उज्जेन र इन्डोनेसियाको बालीलगायत ठाउँमा मनाइन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिमा शिवरात्रि महापर्वको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ ।
यस दिन नि:शुल्क आवास, भोजनको व्यवस्था वनकाली हंसमण्डपमा र तिलगंगा क्षेत्रमा गरिएको छ । कोर क्षेत्रमा डाक्टर, नर्स र एम्बुलेन्सको सुविधासहित नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान र रामघाट स्वास्थ्य केन्द्रको सहभागितामा अलग–अलग स्वास्थ्य शिविर राखिने कोषले जनाएको छ । भण्डारखाल, अमालकोट, तिलगंगा, चार शिवालय दक्षिण, राम मन्दिर, उमाकुण्ड र मेला क्षेत्रको आवास क्षेत्रमा पनि शिविर राखिएको कोषले जनाएको छ । यस्तै विभिन्न संस्थाले नि:शुल्क भोजनको व्यवस्था गरेका छन् ।
प्रहरीले शिवरात्रिको अवसर पारेर पशुपति क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । पशुपति क्षेत्रमा गाँजा, चरेस र भाङ जस्ता लागूऔषधको बेचबिखनमा पनि प्रहरीले कडाइ गरेको छ । प्रहरीले तीन सिफ्टमा गरेर ४ हजार ३ सय ७५ जना सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरेको छ ।
प्रहरीका अलवा स्काउट र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका स्वयंसेवक भक्तजनलाई पशुपति मन्दिरसम्म दर्शनका लागि सहज व्यवस्था मिलाउन खटिनेछन् । थप सुरक्षका लागि भन्दै प्रहरीले पिकेट, मोबाइल, स्ट्राइकिङ र रिजर्भ फोर्सको समेत बन्दोबस्त गरेको छ । प्रहरीले लुटपाट र पाकेटमारी नहोस् भनेर पशुपति क्षेत्रलाई सीसीटीभी निगरानीमा समेत राखेको छ ।
श्रीपशुपतिनाथको इताचोक टोलमा धर्मध्वजा स्थापना गर्न लागिएको ठाउँमा बनाइएको शिव–पार्वतीको पूर्णकदको प्रतिमा ।
काठमाडौं (कास) —पशुपतिनाथको दक्षिण–पश्चिमको इतापाखा टोलको चौताराको आडमै शिव–पार्वतीको पूर्णकदको प्रतिमा तयार भएको छ । यसको निर्माण गर्न रौतहटका कलाकार रामएकवाल साहको अगुवाइमा चारजना कलाकार सहभागी भए । यो प्रतिमा शिव र पार्वतीको ताण्डव मुडमा बनाइएको छ । महाशिवरात्रिको अवसर पारेर यही ठाउँमा धर्मध्वजा स्थापना गर्न लागिएको हो । पशुपति क्षेत्रका आदिवासीको संस्था गोलपुच:ले धर्मध्वजा स्थापना गर्न लागेको हो ।
यहाँ यज्ञकुण्ड खडा हुनेछ । महाशिवरात्रिको दिन शंकराचार्य पीठको शंकराचार्य नियुक्त हुन लागेकी महामण्डलेश्वर हेमानन्द गिरी महाराजश्रीले यसको सुरुवात गर्ने कार्यक्रम तय भएको गोलपुच: समाजका अध्यक्ष तथा श्रीपशुपतिनाथका भण्डारी केदारमान राजभण्डारीले जानकारी दिए । हिमानन्द शंकराचार्यको चार पीठमध्ये बद्री पीठमा नियुक्त हुन लागेकी पहिलो महिला हुन् । शंकराचार्य चार पीठमा जगन्नाथ, रामेश्वर, बद्रीनाथ र द्वारिका पीठ पर्छन् । यीलाई चारधाम भनेर पनि चिनिन्छ ।
धर्मध्वजामा नेपाली राष्ट्रिय झन्डा पनि फहराइनेछ । धर्मध्वजा भारतका प्रसिद्ध धार्मिकस्थलमा खडा गरिए पनि नेपालमा भने पहिलो भएको राजभण्डारीले जानकारी दिए । धर्म नासिँदै गएकाले धर्मध्वजा खडा गरिएको र यसलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए । शिवरात्रिमा सातै दिन यहाँ आरती, शास्त्रीय तथा भक्ति संगीत आयोजना हुनेछ । त्यसपछि हरेक महिनामा एकपटक संगीत आयोजना हुनेछ । यसका लागि भारतबाट पनि गुरुहरू आउनेछन् र ६/६ महिनामा ध्वजा परिवर्तन गरिनेछ ।
अरू धार्मिकस्थलमा शिवको मात्र ताण्डव नृत्य हुन्छ । पाशुपत क्षेत्रमा भने शिव र पार्वतीकै ताण्डप हुने राजभण्डारीले जानकारी दिए । ‘पाशुपात क्षेत्रमा ३३ कोटि देवदेवता छन् । देवदेवताको नवशक्ति पीठ छन् र यो ८१ ग्रह संयोजन भएको क्षेत्र हो । श्रीयन्त्रकार क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । यहाँ शिव र शक्ति दुवैको पूजा गरिन्छ । ‘शिव र पार्वती बीचमा छन् । वरिपरि देवदेवी, क्षेत्रपाल सबै रहेको श्रीयन्त्रकार रूपमा छ, यो क्षेत्र,’ उनी भन्छन्, ‘पाशुपात क्षेत्र तन्त्रभूमि हो । यहाँ हरेक मठमन्दिरमा तान्त्रिक विधिबाट पूजा हुन्छ ।’
शंकारचार्यको पालादेखि वैदिक विधिबाट पनि पूजा हुन थालेको हो । यन्त्रकार रहेकाले सबै तान्त्रिक विधिबाट पूजा हुने गरेको हो । श्रीयन्त्र यन्त्रको पनि राजाका रूपमा लिइन्छ । यसमा सबै साधना सिद्धि मानिन्छ ।’ धर्मध्वजा निर्माण गर्न त्रिवेणीधाम वाल्मीकि आश्रमका महन्थ गुरु वशिष्टले सहयोग गरिराखेका छन् । ‘धर्मध्वजा खडा गरिने ठाउँमा हुने आरतीमा सबै जातिलाई सहभागी गराइनेछ,’ गुरु वशिष्टले भने, ‘यहाँ कुनै जातजातिलाई छुवाछूत गरिने छैन ।’
गाँजाभित्रिने क्रम बढ्दो
काठमाडौं (कास)– उपत्यका भित्रिने नाकाबाट गाँजालगायतका लागूऔषध भित्रिने क्रम बढेको छ । माघ महिनामा मात्रै प्रहरीले उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाट २० फरक घटनामा २६ जनालाई लागूऔषध सेवन र बेचबिखनको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । शिवरात्रि नजिकिँदै गर्दा उपत्यका भित्रिने गाँजा र लागूऔषधको मात्रा बढेको प्रहरीको अनुभव छ । शिवरात्रिमा गाँजालगायतका लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या उपत्यकामा बढ्ने गरेका
कारण यसको अवैध ढुवानी हुने गरेको देखिन्छ ।
प्रहरीले माघ महिनामा मात्रै उपत्यका भित्रिने विभिन्न स्थानबाट ६ केजी ९ सय ग्राम गाँजा बरामद गरेको थियो । त्यसै अवधिमा प्रहरीले २८ केजी २ सय ग्राम चरेस बरामद गरेको थियो । काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाका नागढुंगामा पछिल्लो एक साता प्रत्येक दिनजसो लागूऔषध बरामद हुन थालेको छ । प्रहरीले २० माघमा मात्रै नागढुंगा चेक प्वाइन्टबाट चितवनबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा२ख १९७१ नम्बरको माइक्रोबसमा सवार धादिङ गलडाँडाका उत्तम बराललाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले उनको साथबाट ३ केजी गाँजा बरामद गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार बरालले शिवरात्रिमा गाँजाको किनबेच बढी हुने र त्यही मौकाको सुदपयोग गर्न खोजेका थिए । महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुंगाले आइतबार मात्रै वीरगन्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा४ख ६५६९ नम्बरको यात्रुवाहक बसबाट पर्सा घर भएका नृपकुमार साहलाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीले साहको साथबाट लागूऔषध फेर्नागन २ सय ९९ एम्पुल, डाइजेपाम २३ सय ९८ एम्पुल र नर्फिन २ सय ९८ एम्पुल बरामद गर्‍यो ।
प्रहरीले शिवरात्रिमा लागूऔषधको मात्र बढ्ने अनुमान गरेर नै काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाका जगाती, टोखा, फर्पिङ, जहरसिंहपौवा, टोखा, मुडखु र भैंसेपाटीमा नियमित चेकजाँच र खानतलासी बढाएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी जयबहादुर चन्दले शिवरात्रिमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता सलबलाउने गरेको अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘चेकजाँच र खानतलासीलाई व्यापक रूपमा अघि बढाएका छौं ।’
प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ०८:२१
ठाउँठाउँमा गोरु जुधाइको रौनक
देवघाटमा मकर स्नान
विद्युत् विस्तार गर्न जंगल फँडानी
रसुवागढी नाका : ७६ हजार पर्यटक भित्रिए
माघे संक्रान्ति : लोप भयो चरा मार्ने परम्परा
माडीका ‘चायवाला चाचा’